Architectural famolavolana - Digital Manufacturing Co., Ltd.
Architectural modely 3D pirinty
Ny fampiharana ny 3D an'ireo trano fanontam-pirinty tao an-tsaha dia tsy voafetra ho amin'ny ankapobeny 3D trano fanontam-pirinty, fa koa no ampiharina eo amin'ny famokarana sarotra votoatiny, modely kely (drafitra modely, rivotra tionelina simulation modely, fasika latabatra, sns) fa ny fandaharana fifanakalozana ary ny fampisehoana any ivelany.
3D toerana sy ny fasika fisehon'ny table 3D pirinty
Tamin'ny 3-dimentional toerana sy ny fasika fisehon'ny latabatra, ny fanorenana ny birao vonjimaika trano, tilikambo fanentanana an-tsary, vy trano fisotroana, metatra, milina, sns azo tanana nanitsy. Ny tetikasa toerana fisehon'ny famolavolana sy CI dia afaka ho hita taratra bebe kokoa sy lalina intuitively ny fanapariahana, fanomanana sy ny fampiasana ny toerana eo amin'ny fasika fisehon'ny latabatra. 3-dimentional toerana sy ny fasika fisehon'ny latabatra dia afaka manampy ihany koa ny maneho ny fivoarana farany ao amin'ny habaka, izahao ny vahaolana tsara indrindra, manatsara loharanon-karena fanomezana, afa-tsy amim-pahombiazana ny fandaniana sy hanatsarana ny kalitaon'ny tetikasa. 3D fanontam-pirinty, raha ny marina dia somary matotra teknolojia. Ao amin'ny hoavy, 3D fanontam-pirinty, no hiditra bebe kokoa ny fianakaviana. Angamba afaka pirinty ny fitaovana isan-karazany, fitaovana sy milina mihitsy aza koronosy ilainao ao an-trano, ary indray andro dia afaka pirinty avy ny an-tranony, ary ny saina dia ho voamarina.
Fanontam-pirinty efa voarafitra mialoha singa 3D
Andiana 3DSL rehetra andiam-3D pirinty